‘प्रसाद २’ का लागि विपिन, नम्रता र निश्चलले बढाएका हुन् पारिश्रमिक ? - चौतारीपोष्ट अनलाईन
‘प्रसाद २’ का लागि विपिन, नम्रता र निश्चलले बढाएका हुन् पारिश्रमिक ?
फिल्मीखबर, काठमाण्डौ, 2020/07/31
डेढ वर्ष अगाडिको व्यावसायिक तथा समीक्षात्मक रूपमा सफल फिल्म ‘प्रसाद’ को दोस्रो सिरिज बनाउन यतिबेला निर्माण टिम घुँडा धसेर लागेको छ । अहिले लेखक शुशील पौडेल फिल्मको स्क्रिप्टमा काम गरिरहेका छन् । सुवास थापाले निर्माण गर्ने फिल्ममा निर्देशक भने फेरिएका छन् । दिनेश राउतले ‘प्रसाद २’ नगरेपछि सौरभ चौधरीले निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
‘प्रसाद’ सुरु हुनुभन्दा अगाडि र अन्त्य भएपछिको कथामा फिल्म निर्माण हुने निर्माता थापाको भनाई छ । उनका अनुसार, स्थिति सामान्य भएपछि फिल्मको छायांकन सुरु हुनेछ । तर, अहिलेसम्म कलाकारको टुंगो भने लागेको छैन । निर्माण टिम फिल्ममा पुरानै कलाकार दोहोर्‍याउने पक्षमा छ । नम्रता श्रेष्ठ, विपिन कार्की र निश्चल बस्नेतसँग केही चरणमा कुरा समेत भइसकेको छ ।
फिल्मीखबरलाई गोप्य स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, ‘प्रसाद २’ का लागि तीनै जना कलाकारले मोटो रकम मागेका छन् । उनीहरु २५ लाखभन्दा कममा फिल्म गर्न नसक्ने अडानमा बसेको बुझिएको छ । फिल्ममा निर्देशक हेरफेर भएपछि उनीहरुले पारिश्रमिक बढाएको स्रोत बताउँछ । माग गरेअनुसार पारिश्रमिक पाएको खण्डमा मात्र उनीहरु काम गर्न तयार रहेको बताइन्छ ।
कलाकारले पारिश्रमिक बढाएको विषयमा निर्माता थापाले फिल्मीखबरसँग भने- ‘उहाँहरुले यति नै लिन्छौं भनेर भन्नुभएको छैन । तर, पारिश्रमिक बढाउने संकेत चाहिँ गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म एक चरणमा मात्र कुराकानी भएका कारण पारिश्रमिकको विषयमा गहिराइमा कुरा हुन पाएको छैन ।’ विपिन, नम्रता र निश्चल विना ‘प्रसाद २’ बन्न नसक्ने पनि उनी बताउँछन् ।
‘सेल्फी किङ’ भन्दा अगाडि नै निर्माता थापाले ‘प्रसाद २’ का लागि निर्देशक दिनेश राउतलाई प्रस्ताव राखेका थिए । तर, राउतले फिल्मको लिगेसीलाई अगाडि बढाउन असहमति जनाए । फिल्मीखबरसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘त्यो आफैंमा सुन्दर चीज बनेको छ । त्यसको सिक्वेल वा प्रिक्वेल बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रुपमा नलागेर फिल्ममा नजोडिएको हुँ ।’
‘प्रसाद’ समीक्षात्मक रुपमा अब्बल ठहरिनुमा निर्देशक राउतको निर्देशकिय क्षमता प्रमुख मानिन्छ । उनले लेखक शुशील पौडेलको स्क्रिप्टलाई कुशलतापूर्वक पर्दामा उतारेका थिए । विपिन, नम्रता र निश्चलले दोस्रो पार्टका लागि पारिश्रमिक बढाउनुको कारण निर्देशक राउत रिप्लेस हुनुलाई मानिएको छ । उनीहरुले निर्देशक सौरभ चौधरीमाथि विश्वास गर्न नसकेको बुझिएको छ ।
Prevखनाल भन्छन्— ‘जेसीजमा केही राम्रो दिन सकिन्छ कि भनेर जाने मात्र हो ’
Next‘प्रेमगीत ३’ रिलिज नहुँदै नयाँ फिल्ममा मनिष